Shina Atsofohy ny mpamokatra sy ny mpamatsy | Mestech
Ampidiro koronosydia dingana famolahana tsindrona plastika izay ampidirina anaty lavaka ny plastika ary manodidina ny sombin-tsofina na sombina apetraka ao anaty lava-kazo alohan'ny famolavolana. Ny vokatra vokatr'ity fizotrany ity dia singa tokana misy sisiny na tsofoka fonosin'ny plastika.
Ny insure mould dia manitatra ny fahafahan'ny plastika ary afaka manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny vokatra amin'ny famerana ny habetsaky ny metaly lafo vidy ilaina amin'ny fanamboarana vokatra. Ny insert dia azo vita amin'ny vy na plastika hafa. Ity karazana famolavolana ity dia novolavolaina tamin'ny voalohany mba hametahana ireo tsofoka misy kofehy amin'ny faritra voavolavola sy hametahana ny fifandraisana misy eo amin'ny tariby amin'ny tadin'ny herinaratra.
Izahay dia manitatra ity dingan'ny famolavolana ity mba hanatanterahana zavatra izay tsy mety na tsy hovolavolain'ny mpamorona hafa.
Miankina amin'ny haben'ny ampahany, azo amboarina ny bobongolo misy lavarangana maro mba hampitomboana ny famokarana. Indraindray ny asa famolavolana paositra faharoa dia takiana amin'ny famitana ny fivoriambe.
Ny fampidirana amboarina dia ny fomba famolavolana izay ampiasaina ny bobongolo hampidirana resina ao amin'ilay tsofoka efa nomanina miaraka amina fitaovana samihafa, ary ny zavatra narendrika dia ampiarahina amin'ny sisiny mba hamoronana vokatra mitambatra. Ny ampahany mifono dia mazàna vy, fa koa lamba, taratasy, tariby, plastika, vera, hazo, peratra tariby, faritra elektrika.
Ireto ny asan'ny fizotran'ny famolavolana Insert:
1. Ilaina ny mandinika ny fitambarana sy ny famenon'ilay mora resina, miondrika, ny hamafin'ny vy, ny tanjaka ary ny fanoherana ny hafanana, mba hamokarana plastika vita amin'ny vy vita amin'ny vy sarotra sy mahafinaritra.
2. Manokana, ny fitambaran'ny insulate resin sy ny conductivity vy dia ampiasaina, ary ireo vokatra niforona dia afaka mahafeno ny fiasa fototra amin'ny vokatra elektrika.
3. Ny fampifangaroana mialoha ny fampidirana marobe dia mahatonga ny injenieran'ny paositry ny singa mitambatra ho ara-dalàna kokoa.
4. Ny vokatra mampiditra dia tsy voafetra amin'ny vy ihany, fa koa lamba, taratasy, tariby, plastika, vera, hazo, coil, faritra elektrika sns.
5. Ho an'ny vokatra bobongolo henjana sy ny vokatra bobongolo miolakolaka amin'ny takelaka fanamafisam-peo vita amin'ny kodiarana dia azo sorohina ny asa sarotra amin'ny fandaminana ny peratra famehezana aorian'ny vokatra vita amin'ny alàlan'ny famolavolana tsindrona amin'ny substrate, izay mahatonga ny fitambaran'ny mandeha ho azy mora kokoa ny fizotrany manaraka.
6. Satria izy io dia fitambaran'ireo fitaovana anidina sy vy fampidirana, ny elanelana misy eo amin'ny tsofoka vy dia azo noforonina tery kokoa ary ny fahamendrehana amin'ny famolavolana ireo vokatra mitambatra dia avo kokoa noho ny an'ny fanaovan-gazety ..
7. Safidio ny resin sy ny famolavolana sahaza azy, izany hoe ho an'ny vokatra mora simba (toy ny vera, coil, faritra elektrika sns.), Izy ireo koa dia azo asiana tombo-kase ary hamboarin'ilay damina.
8. Miaraka amin'ny fitambaran'ny masinina miorina amin'ny tsindrona mitsivalana sy ny manipulator, ny akora fampidirana sy ny sisa, ny ankamaroan'ny tetikasa famolavolana insul dia afaka mahatsapa famokarana mandeha ho azy.
9. aorian'ny namoronana ny insert, dia azo amboarina ihany koa ireo vokatra misy lavaka avela aorian'ny fitsaboana fanesorana ny lavaka lehibe.
Torohevitra momba ny endrika amam-bika sy ny bobongolo ny koronosy insert
1. Fepetra takiana amin'ny fampidirana: henjana, teboka miempo, henjana, mihena
2. Na ny endrika sy ny haben'ny ampidiro dia mety amin'ny fakana, fametrahana ary fametrahana. Ny famolavolana ny ampahany dia mety amin'ny fametrahana sy fametrahana azy amin'ny lasitra mba hisorohana ireo faritra tsy hivily na hamaha eo ambanin'ny fiantraikan'ny resina mikoriana.
3. Fahamarinana famokarana sy tsy fitovizan'ny inserts
4. Safidio ny firafitry ny bobongolo mety, ary ny tsofoka dia azo asiana tombo-kase tanteraka koa ao amin'ilay resina.
5. Ny fihenan'ny famolavolana fampidirana vy dia mora tsy mitongilana. Ny fisedrana ferana ny endrika sy ny haben'ny maha-zava-dehibe ireo ampahany manan-danja dia tokony hatao mialoha.
6. Mandritra ny dingan'ny tsindrona, ny fampidirana vy dia mora simba sy miova, noho izany ny firafitry ny bobongolo sy ny famolavolana endrika bobongolo izay mora hitazonana ny fampidirana vy dia tokony hodinihina feno. Ho an'ireo vokatra izay tsy azo ovaina ny endrika mampiditra azy dia tena ilaina tokoa ny fitsapana mialoha.
7. Hamafiso raha mila fitsaboana mialoha na fanamainana ny fampidirana vy. Ny tanjona dia ny hiantohana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fametrahana fitoniana.
Famolavolana metaly Ny famolavolana metaly no be pitsiny indrindra amin'ny famolavolana.
Ny famolavolana metaly dia karazana fomba iray hanamboarana ny fampidirana vy amin'ny toerana mety ao anaty lasitra mialoha, ary avy eo atsindrohy plastika amin'ny famolavolana. Aorian'ny fisokafan'ny bobongolo, ny fonosana dia fonosina amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fampangatsiahana sy fanamafisana plastika mba hahazoana ny vokatra misy tsofoka toy ny peratra misy tadiny sy electrode.
Ilaina ny ampahany amin'ireo fampidirana vy natsofoka mba hanana rafitra sy hateviny mety, ary ny ampahany amin'ny tsofoka raikitra ao anaty lasitra dia azo apetraka haingana sy azo antoka mba hisorohana ny plastika tsy hidina ao anaty lavaka fametahana. Ireo tsofoka dia mila noforonina manokana ihany koa, toy ny knurling, grooving, manodinkodina, sns. Ao amin'ireo faritra natsofoka mba hiantohana ny fametahana azo antoka ao anaty plastika.
Namboarina namboarina nampiditra bobongolo faritra:
Mestech dia fampiharana manokana amin'ny famolavolana sisin-tsolika .. Azafady mba mifandraisa aminay mba hanampiana anao hahita ny vahaolana famolavolana inserting marina ho an'ny fampiharana anao.
Power plug mampiditra tsindrona koronosy
Mamolavola voanjo vy mamolavola
Famolavolana takelaka metaly fametrahana mazava
Famolavolana voanjo metaly
Manaraka: Prototype vy
Fampidirana bobongolo vita printy 3d
Tsindrona atsofoka tsofina
Ampidiro koronosy tsindrona
Fampidirana lasitra azo ovaina